Ragii ka dambeeyay Dil loo geestay Sheekh Maxamed Madeer oo la qabtay+Video | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ragii ka dambeeyay Dil loo geestay Sheekh Maxamed Madeer oo la qabtay+Video
Wararka aan ka heleno magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada amaanka maamulkaasi gacanta kusoo dhigeen sadex nin oo loo heesto in ay ka dambeeyeen dil habeen hore ka dhacay magaalada Baydhabo.
Sheekh Maxamed Madeer oo la sheegay in uu katirsanaa Ergadii Xildhibaanada ku doortay magaalada Baydhabo ayaa lagu dhax dilay Masjid kuyaala magaaladaasi, waxaana dilay sadex nin oo la sheegay in ay ku hubeesnaayeen bistoolado.
Sargaal katirsan ciidanka booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in la aqoonsaday mid kamid ah ragii dilkaasi geestay ayna gacanta kusoo dhigeen, waxa uuna intaa raaciyay in ninkaasi uu isna far muuqay labo mnin oo kale oo dilkaasi gacan ka geestay.
Waxa uu sheegay sargaalkan in baaritaano lagu wado ragan ku eedeesan dilka Sheekh Maxameed Madeer oo katirsanaa ergadii Baarlanaanka Baydhabo ku dooratay, waxa uuna tilmaamay in sharciga la horgeyn doono hadii ay ku cadaato kiiskan loo heesto.
Ergadii Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya kusoo doortaya gobolada dalka ayaa xiligan wajahaya dil kaga imaanaya Ururka Al Shabaab, magaalada Muqdisho ayaana noqotay halka ugu badan ee lagu dilay Ergadii Xildhibaanada soo dooratay.